Koonfurta Badda Pearl Indonesia - Gold South Sea Pearl Wholesale | Sea Pearl Dealer From Indonesia Pearl Farm | Tahitian Sea Pearl Wholesale | Moti Wholesale
Home / harga perhiasan mutiara lombok / Koonfurta Badda Pearl Indonesia
Koonfurta Badda Pearl Indonesia
Indonesia Koonfurta Badda Pearl
Indonesia waa jasiiradaha adduunka ugu weyn oo leh kalluumeysiga qani ah iyo wax soo saarka badda. Mid ka mid ah alaabooyinkan oo kale waa luul badda koonfureed, oo lagu doodi karo mid ka mid ah noocyada ugu fiican ee luul. Kaliya maahan in lagu deeqay kheyraad dabiici ah oo qani ah, Indonesia sidoo kale waxay leedahay farsamoyaqaanno fara badan oo leh xirfado farshaxan oo sare.
Maqaalkan, waxaanu ku soo qaadanaynaa badeecad kale oo gaar ah oo Indonesian ah, luul badda koonfureed. Sida waddan ku yaal isku-goysyada labada badood iyo laba qaaradood, dhaqanka Indooniisiya wuxuu soo bandhigayaa isku-dhafan gaar ah oo qaabaysan is-dhexgalka dheer ee ka dhexeeya caadooyinka asaliga ah iyo saamaynta shisheeye ee badan. Dhaxalka dhaqameed ee hodanka ah ee Indonesia wuxuu bixiyaa adduunka noocyo kala duwan oo dahab ah oo la isku qurxiyo.
Mid ka mid ah ciyaartoyda adduunka ugu sarreeya, Indonesia ayaa farsamayn jirtay oo u dhoofinaysay luul suuqyada caalamiga ah, sida Australia, Hong Kong, Japan, South Korea iyo Thailand. Marka loo eego tirakoobyada, qiimaha dhoofinta luulku wuxuu kordhay 19.69% celcelis ahaan sanadkiiba intii u dhaxaysay 2008-2012. Shantii bilood ee ugu horreysay 2013, qiimaha dhoofku wuxuu gaadhay US$9.30
Luul tayo sare leh ayaa loo arkaa mid ka mid ah walxaha qaaliga ah ee quruxda qarniyo badan, oo la siman dhagaxyada kale ee qaaliga ah. Farsamo ahaan, luul ayaa lagu soo saaraa gudaha moluc qolof leh, gudaha unugyada jilicsan ama gogosha.
Luulku waxa uu ka samaysan yahay kaarboonaydh kaalshiyam ah qaab crystalline ah oo kale, sida qolofka deggan, ee lakabyada xoogga leh. Luul ku habboon ayaa noqon doona mid wareegsan oo siman laakiin waxaa jira qaabab kale oo badan oo pears ah, oo loo yaqaan luul baroque.
Sababtoo ah luulka ayaa ugu horrayn laga sameeyay kaalshiyam carbonate, waxaa lagu milmi karaa khal. Kaalshiyam carbonate waxay u nugul tahay xitaa xal acid daciif ah sababtoo ah crystals of calcium carbonate falgal la acetic acid ee khalka si ay u sameeyaan calcium acetate iyo carbon dioxide.
Luul dabiiciga ah ee si kedis ah uga dhaca duurjoogta ayaa ah kuwa ugu qiimaha badan laakiin isla markaana aad dhif u ah. Luulyada hadda laga helayo suuqa ayaa inta badan laga beeraa ama laga beeraa lohod luulka iyo mussels biyaha macaan.
Luul ku dayashada ayaa sidoo kale si ballaaran loo soo saaraa sida dahabka aan qaali ahayn inkastoo tayada ay aad uga yar tahay kuwa dabiiciga ah. Luul macmal ah ayaa leh indho-xumo xun oo si fudud ayaa looga soocaa kuwa dabiiciga ah.
Tayada luulka, kuwa dabiiciga ah iyo kuwa la beeray labadaba, waxay ku xidhan tahay inuu yahay nacreous iyo ur-bax sida gudaha qolofka soo saaraya. Halka luul inta badan la beero lagana goosto si loo sameeyo dahabka, waxaa sidoo kale lagu tolay dhar qurxoon iyo sidoo kale la jajabiyey oo loo isticmaali jiray qurxinta, daawooyinka iyo isku dhafka rinjiga.
Luul waxa loo qaybin karaa saddex qaybood oo ku salaysan samayntiisa: dabiici, dhaqan iyo ku dayasho. Ka hor inta aan la baabi’in luul-dabiiciga ah, qiyaastii qarni ka hor, dhammaan luulka la helay waxay ahaayeen luul dabiici ah.
Maanta Luul-dabiiciga ah waa mid naadir ah, waxaana inta badan lagu iibiyaa xaraashka New York, London iyo goobaha kale ee caalamiga ah iyadoo lagu iibinayo qiimaha maalgashiga. Luulyada dabiiciga ah waa, qeexitaan, dhammaan noocyada luul ee lagu sameeyay shil, iyada oo aan faragelin bini’aadan.
Waxay yihiin maxsuulka fursada, oo leh bilow ka cadhaysiinaya sida dulin duugoobay. Fursadda dhacdadan dabiiciga ah aad bay u yar tahay maadaama ay ku xidhan tahay soo gelida aan la jeclayn ee alaab shisheeye ah oo lohodku aanu awoodin inuu jidhkiisa ka saaro.
Luul dhaqameedku wuxuu maraa hab isku mid ah. Haddii ay dhacdo luul-dabiiciga ah, lohodku keligiis ayuu shaqaynayaa, halka luul-dhaqameedku ay yihiin wax-soo-saarka faragelinta aadanaha. Si lohodku u soo saaro luul, farsamayaqaan ayaa si ulakac ah ugu beera xajiinta gudaha lohodka. Maaddada qaliinka lagu beeray waa qayb qolof ah oo lagu magacaabo Hooyada Luul.
Farsamadan waxaa sameeyay baayooloji Ingiriis ah William Saville-Kent oo Australia jooga waxaana Japan keenay Tokichi Nishikawa iyo Tatsuhei Mise. Nishikawa ayaa la siiyay shatiga 1916, wuxuuna guursaday gabadha Mikimoto Kokichi.
Mikimoto wuxuu awooday inuu isticmaalo tignoolajiyada Nishikawa. Ka dib markii la siiyay shatiga 1916, tignoolajiyada ayaa isla markiiba ganacsi ahaan loo adeegsaday Akoya pearl lohod ee Japan 1916. Mise walaalkiis ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee soo saara dalag ganacsi oo luul ah oo ku yaal Akoya lohod.
Mitsubishi’s Baron Iwasaki isla markiiba wuxuu adeegsaday tignoolajiyada lohod luul ee Badda Koonfureed 1917 ee Filibiin, iyo markii dambe Buton, iyo Palau. Mitsubishi wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee soo saara luul dhaqameed ee Koonfurta Badda – inkasta oo aysan ahayn ilaa 1928 in dalaggii ugu horreeyay ee ganacsi yar ee luul ah si guul leh loo soo saaro.
Luul ku dayasho waa sheeko ka duwan guud ahaan. Inta badan, kuul quraarad ah ayaa lagu dhex daraa xal laga sameeyay miisaanka kalluunka. Dahaarkani waa dhuuban waxaana laga yaabaa inuu ugu dambeyntii dago. Sida caadiga ah qofku wuxuu sheegi karaa ku dayasho isagoo qaniinay. Luul been abuur ah ayaa ku dul babanaya ilkahaaga, halka lakabyada nacre ee luul dhabta ah ay dareemayaan qallafsanaan. Jasiiradda Mallorca ee dalka Spain waxa ay caan ku tahay warshadaha luulka ku dayashada.
Waxaa jira siddeed qaab oo aasaasi ah oo luul ah: wareegsan, wareeg-wareeg ah, badhanka, dhibicda, pear, oval, baroque, iyo goobaabin.
Luul wareegsan oo qumman ayaa ah qaabka ugu yar uguna qiimaha badan.
Semi-rounds sidoo kale waxaa loo isticmaalaa katiinado ama qaybo ka mid ah halkaas oo qaabka luulku la isku qarin karo si uu u ekaado luul wareegsan oo qumman.
Luul badhanka waa sida luul wareeg ah oo yara fidsan, sidoo kale wuxuu samayn karaa silsilad, laakiin inta badan waxaa loo adeegsadaa hal-dhegaha ama hilqado halka dambe ee luulku ku daboolan yahay, taas oo ka dhigaysa mid weyn oo wareegsan.
Luul-luul-luul-qaabeeya ayaa mararka qaarkood loo yaqaannaa luul-jilicsan oo inta badan lagu arko hilqado, dhejisyo, ama luul dhexe oo silsilad ah.
Luul Baroque waxay leeyihiin rafcaan ka duwan; inta badan waa kuwo aan caadi ahayn oo leh qaabab gaar ah oo xiiso leh. Waxay sidoo kale caadi ahaan lagu arkaa silsiladaha.
Luul goobaaban waxa lagu gartaa tiirar badan, ama siddo, agagaarka jidhka luulka.
Marka la eego Nidaamka Iswaafajinta (HS), luulku wuxuu u qaybsan yahay saddex qaybood oo hoose: 7101100000 ee luul dabiiciga ah, 7101210000 ee luul dhaqan, aan shaqayn iyo 7101220000 ee luul dhaqameed, la shaqeeyay.
Iftiiminta Pearl ee INDONESIA
Qarniyo badan, luul badda koonfureed ee dabiiciga ah ayaa loo arkaa inay tahay abaalmarinta dhammaan luul. Helitaanka sariiraha luul ee badda koonfureed ee ugu faa’iidada badan gaar ahaan Indonesia iyo gobolka ku xeeran, sida, Waqooyiga Australia horaantii 1800-meeyadii waxay ku dhammaatay waagii ugu xiisaha badnaa ee luul ee Yurub xilligii Victoria.
Luul noocaan ah waxaa laga soocaa dhammaan luulyada kale iyadoo loo eegayo nacre dabiici ah oo qaro weyn leh. Nacre-dabiiciga ah wuxuu soo saaraa dhalaal aan sinnayn, kan aan kaliya bixin ” dhalaal ” sida luul kale, laakiin muuqaal jilicsan, muuqaal aan la taaban karin oo beddela niyadda xaaladaha iftiinka kala duwan. Quruxda nacre-kan oo jeclaysatay luul-badeedda Koonfureed ee dahab-yaqaannada khubarada leh ee dhadhanka takoorka qarniyadii lasoo dhaafay.
Dabiici ahaan waxaa soo saaray mid ka mid ah lohodyada ugu weyn ee luul-qaadka ah, Pinctada maxima, oo sidoo kale loo yaqaanno Silver-Lipped ama Gold-Lipped lohod. Mollusc-ka qalinka ah ama dahabka leh wuxuu kori karaa cabbirka saxanka cashada laakiin aad bay ugu nugul yihiin xaaladaha deegaanka.
Dareenkaani wuxuu ku darayaa qiimaha iyo naadirnimada Luulka Badda Koonfureed. Sidan oo kale, Pinctada maxima waxay soo saartaa luul cabbirro waaweyn oo u dhexeeya 9 millimitir ilaa 20 millimitir oo celcelis ahaan cabbirkiisu yahay 12 millimitir. Iyadoo loo aaneynayo dhumucda nacre, Luul Badda Koonfurta ayaa sidoo kale caan ku ah noocyada kala duwan ee qaababka gaarka ah iyo kuwa la jecel yahay ee la helay.
Xagga sare ee wanaaggaas, luulka Badda Koonfureed waxa kale oo uu leeyahay midabyo kala duwan oo kareem ilaa huruud ah ilaa dahab qoto dheer iyo caddaan ilaa qalin. Luulku waxa kale oo laga yaabaa inuu soo bandhigo qurux badan oo “dharbaaxo” midab kale ah sida casaan, buluug ama cagaar.
Maalmahan, sida kiiska kale ee dabiiciga ah, luul dabiiciga ah ee Badda Koonfureed wuxuu ku dhawaaday inuu ka lumo suuqyada luulka ee adduunka. Inta badan luulka badda koonfureed ee maanta la heli karo waxaa lagu beeraa beeraha luulka ee badda koonfureed.
Luul-badeedda Koonfureed ee Indonesia
Sida soo saaraha hormuudka ah, Indonesia, mid ayaa qiimeyn kara quruxdooda marka la eego iftiinka, midabka, cabbirka, qaabka iyo tayada dusha sare. Luul leh midabka sharafta leh ee Imperial Gold waxaa soo saara oo kaliya lohodka oo lagu beero biyaha Indonesia. Marka la eego dhaldhalaalka, luul badda koonfureed, labadaba dabiiciga ah iyo kuwa dhaqanka, waxay leeyihiin muuqaal aad u kala duwan.
Dhallaanka dabiiciga ah ee gaarka ah awgeed, waxay soo bandhigaan dhalaal gudaha ah oo si fiican uga duwan iftiinka dusha sare ee luul kale. Waxaa mararka qaarkood lagu sifeeyaa isbarbardhigga iftiinka shumaca iyo iftiinka iftiinka.
Mararka qaarkood, luul tayada aadka u fiican ayaa soo bandhigi doona dhacdo loo yaqaan orient. Tani waa isku dhafka dhalaalid dhalaalaya oo leh midabyo khafiif ah. Midabada ugu iftiinka badan ee luul badda koonfureed waa caddaan ama caddaan leh midabyo kala duwan.
Dhadhanka-dhaafku wuxuu noqon karaa ku dhawaad ​​midab kasta oo qaansoroobaad ah, waxaana laga soo qaatay midabada dabiiciga ah ee nacre ee lohod luul ee Badda Koonfureed. Marka lagu daro dhaldhalaalka xooggan ee translucent, waxay abuuraan saamaynta loo yaqaan “orient”. Midabada sida weyn loo helo waxaa ka mid ah, Silver, Pink White, White Rose, Golden White, Cream Dahab ah, Champagne iyo Dahab Imperial.
Midabka dahabiga ah ee Imperial ayaa ah midka ugu yar dhammaan. Midabkan quruxda badan waxaa soo saara oo kaliya lohod-yada oo lagu beero biyaha Indonesia. Luul-luul-badeedda Koonfurta-badeedku way ka sarreeyaan cabbir ahaan, waxayna guud ahaan u dhexeeyaan 10mm iyo 15 millimitir.
Marka cabbiro waaweyn la helo, luul naadir ah oo ka sarreeya 16 milimitir iyo marmar in ka badan 20 milimitir ayaa aad u qiimeeya aqoon-yahannada. Haddii quruxdu ay ku jirto isha fiirsiga, markaa Koonfurta Sea Pearls waxay bixisaa fursado badan oo qurux badan si ay u arkaan, maadaama aysan jirin laba luul oo isku mid ah. Sababo la xiriira dhumucdooda nacre, luulka dhaqanka ee Badda Koonfureed waxaa laga helaa qaabab kala duwan oo xiiso leh.
Pearl nacre waa matrix qurux badan oo ah kalsiyum carbonate crystals iyo walxo gaar ah oo ay soo saarto lohodku. Matrixkan waxa lagu dejiyey dusiyo yaryar oo si fiican u samaysmay, lakabna dul saaran. Dhumucda luulka waxaa lagu go’aamiyaa tirada lakabyada, iyo dhumucda lakab kasta.
Muuqaalka nacre waxaa lagu go’aamin doonaa haddii crystals-ka kalsiyumku ay yihiin “flat” ama “prismatic”, iyada oo la qumman yahay taas oo muraayadaha la dhigo, iyo ganaaxyada iyo tirada lakabyada lakabyada. Saamaynta
quruxda luulku waxay kuxirantahay heerka muuqaalka muuqaalkan kaamil ah. Tayada dusha sare ee luulka waxaa lagu tilmaamaa midabka luulka.
Inkasta oo qaabku aanu saameyn ku yeelan tayada luul, baahida qaababka gaarka ah ayaa saameyn ku leh qiimaha. Si ay ugu habboonaato, luulka dhaqameed ee Badda Koonfureed ayaa lagu qiimeeyay toddobadan qaybood ee qaabka. Qaybo dhawr ah ayaa loo sii kala qaybiyay qaybo-hoosaadyo badan:
Indonesia waxa ay soo saartaa luul-badeedka koonfureed oo laga beero Pinctada maxima, oo ah nooca ugu wayn ee lohodka. Sida jasiirado leh deegaan nadiif ah, Indonesia waxay siisaa deegaanka ugu fiican ee Pinctada maxima si ay u soo saarto luul tayo sare leh. Indonesia ee Pinctada maxima waxay soo saartaa luul leh in ka badan daraasiin midabyo midab leh.
Luulyada naadirka ah iyo kuwa ugu qiimaha badan ee la soo saaro waa kuwa leh midabyo dahab iyo qalin ah. Noocyo kala duwan oo midabyo jilicsan, iyo kuwo kale, silver, champagne, caddaan dhalaalaya, casaan iyo dahab, oo leh Imperial Gold Pearl oo ah midka ugu quruxda badan dhammaan luul.
Midabka Dahabka Imperial ee ay soo saarto lohodka ee lagu beero biyaha Indonesian waa run ahaantii Boqorada Badda Koonfureed. In kasta oo biyaha Indonesia ay hoy u yihiin luul badda koonfureed, haddana waxaa loo baahan yahay xeer lagu xakameynayo ganacsiga gudaha iyo dhoofinta si loo hubiyo tayada iyo qiimaha luulka. Xukuumadda iyo xisbiyada la xidhiidha ayaa leh
la dhisay xiriir adag si loo xalliyo caqabada.
Marka laga hadlayo Luul Shiineeska ah oo laga soo dhaqo miraha biyaha macaan, loogana shakisan yahay in darajadiisu hooseyso, dowladdu waxay qaaday tallaabooyin taxaddar ah oo ay ka mid yihiin inay soo saartay Xeer-nidaamiyaha Wasaaradda Kalluumeysiga iyo Arrimaha Badaha ee No. 8/2003 ee ilaalinta tayada Luul. Cabbirku waa lagama maarmaan sida luul Shiinees ah oo tayadoodu hooseyso laakiin aad ugu eg luul Indonesia. waxay khatar ku noqon kartaa xarumaha wax soo saarka luulka Indonesia ee Bali iyo Lombok.
Dhoofinta luul Indonesia ayaa muujisay koror aad u weyn muddada 2008-2012 iyadoo celcelis ahaan kobac sanadeedka 19.69%. Sannadkii 2012, inta badan Dhoofinta waxa u badnaa luul dabiiciga ah 51%.22. Luul dhaqan, oo aan shaqayn, oo ku xigay labaad fog oo leh 31.82% iyo luul dhaqan, ayaa shaqeeyay, 16.97%.
Dhoofinta luulka Indonesia 2008dii waxa lagu qiimeeyay kaliya US$14.29 milyan ka hor inta aan si wayn loo kordhin ilaa US$22.33 milyan sanadkii 2009
Jaantuska 1. Dhoofinta Indonesian ee Luul (2008-2012)
wuxuu kordhay US$31.43 milyan iyo US$31.79 milyan 2010 iyo 2011 siday u kala horreeyaan. Dhoofinta, si kastaba ha ahaatee, waxaa lagu dhimay US$29.43 milyan sanadkii 2012.
Isbeddelka guud ee hoos u dhaca ayaa sii socday shantii bilood ee ugu horreysay 2013 iyada oo la dhoofiyay US$9.30 milyan, qandaraas 24.10% ah marka la barbar dhigo US$12.34 milyan isla muddadaas 2012.
Jaantus 2. U dhoofinta Indonesian (2008-2012)
Sannadkii 2012, meelaha ugu waaweyn ee loo dhoofiyo luul Indonesia waxay ahaayeen Hong Kong, Australia, iyo Japan. Dhoofinta Hong Kong waxay ahayd US$13.90 milyan ama 47.24% wadarta dhoofinta luul Indonesia. Japan ayaa ahayd dalka labaad ee dhoofinta ugu badan oo leh US$ 9.30 milyan (31.60%) waxaana ku soo xiga Australia oo heshay US$5.99 milyan (20.36%) South Korea oo leh US$105,000 (0.36%) iyo Thailand oo leh US$36,000 (0.12%).
Shantii bilood ee ugu horreysay 2013, Hong Kong waxay mar kale noqotay meesha ugu sarreysa ee dhoofinta luulka US$4.11 milyan, u dhiganta 44.27%. Australia waxay ku badashay Japan oo kaalinta labaad ku jirta US$2.51 million (27.04%) Japan ayaa kaalinta sadexaad ku jirta US$2.36 million (25.47%) waxaana ku soo xigay Thailand oo heshay US$274,000 (2.94%) South Korea oo heshay US$25,000 (0.27%).
In kasta oo Hong Kong ay muujisay kobac aan caadi ahayn oo sannadle ah oo ah 124.33% muddadii 2008-2012, kobaca ayaa qandaraas ku qaatay 39.59% shantii bilood ee ugu horreysay 2013 marka la barbar dhigo isla muddadaas 2012. Dhoofinta Japan ayaa sidoo kale muujisay qandho la mid ah 35.69 %
Jaantus 3. Dhoofinta Indonesian ee Gobolka (2008-2012)
Inta badan Dhoofinta Luul Indonesia waxay ka timid Bali, Jakarta, South Sulawesi, iyo Galbeedka Nusa Tenggara oo qiimahoodu u dhexeeyo US$1,000 ilaa US$22 milyan.
Jaantus 4. U Dhoofinta Luul, Nat ama cult, iwm oo loo dhoofiyo Adduunka Dal ahaan (2012)
Wadarta guud ee dhoofinta luulka adduunka ee 2012 waxa ay gaadhay US$1.47 bilyan taas oo 6.47% ka hoosaysa tiradii wax dhoofinta ee 2011 ee US$1.57 bilyan. Muddadii u dhaxaysay 2008-2012, celceliska sannadlaha waxa soo gaadhay foosha 1.72%. Sannadkii 2008dii, dhoofinta luulka adduunku waxa ay gaadhay US$1.75 bilyan oo kaliya in ay hoos u dhacdo sannadaha soo socda. Sannadkii 2009, dhoofinta ayaa la dhimay ilaa US$1.39 ka hor inta aan la qaadin ilaa US$1.42 bilyan iyo US$157 bilyan 2010 iyo 2011 siday u kala horreeyaan.
Hong Kong waxay ahayd dhoofiyaha ugu sarreeya sannadkii 2012 isagoo leh US$408.36 milyan saamigii suuqa ee 27.73%. Shiinaha ayaa kaalinta labaad ku jira dhoofinta US$283.97 milyan oo ka dhigaysa 19.28% saamiga suuqa, Japan waxa ku xiga US$210.50 million (14.29%), Australia waxa ay dhoofisay US$173.54 million (11.785) iyo French Polynesia oo dhoofisay US$76.18 million ( 5.17% si loo soo koobo 5ta ugu sareysa.
Kaalinta 6-aad waxa uu ahaa Maraykanka oo dhoofiyay US$65.60 million oo ah saamiga suuqa ee 4.46% waxa ku xiga Switzerland US$54.78 million (3.72%) iyo Ingiriiska oo dhoofiyay US$33.04 million (2.24%). Dhoofinta US$29.43 milyan oo luul ah, Indonesia ayaa gashay kaalinta 9-aad iyada oo saami suuqeedkeedu dhan yahay 2% halka Filibiin ay dhamaystirtay liiska 10-ka sare ee dhoofinta US$23.46 milyan (1.59%) sanadkii 2012.
Jaantuska 5. Wadaagga iyo Kobaca Dhoofinta Adduunka (%)
Intii u dhaxaysay 2008-2012, Indonesia waxay leedahay kobaca ugu sarreeya ee 19.69% waxaana ku xiga Filibiin 15.62%. Shiinaha iyo Maraykanku waxay ahaayeen dhoofinta kale ee kaliya ee la kulmay isbeddello kobac togan oo ah 9% iyo 10.56% siday u kala horreeyaan 10ka waddan ee ugu sarreeya.
Indonesia, si kastaba ha ahaatee, waxaa la soo darsay 7.42% qandho sanadba sanadka ka dambeeya intii u dhaxaysay 2011 iyo 2012 iyadoo Filibiin ay leedahay kobaca ugu weyn sanad-sannadka 38.90% iyadoo Australia ay tahay midda ugu waxqabadka xun taasoo qandaraas ku qaadatay 31.08%.
Marka laga reebo Australia, wadamada kaliya ee ku jira 10-ka ugu sareeya ee wax dhoofiya kuwaas oo diiwaangeliyay kobaca dhoofintooda luulka ah
Maraykanka oo koray 22.09%, Ingiriiska 21.47% iyo Switzerland 20.86%.
Dunidu waxay soo dejisay US$1.33 bilyan oo luul ah sannadkii 2012, ama 11.65% ka hoosaysa tiradii 2011 ee soo dejinta oo ahayd US$1.50 bilyan. Muddadii 2008-2011, soo dejinta waxa soo gaadhay hoos u dhac sannadle ah oo ah 3.5%. Luulka la soo dejiyo adduunku waxa uu gaadhay meeshii ugu sarraysay 2008 isaga oo helay US$1.71 bilyan ka hor inta aanu hoos u dhicin US$1.30
Jaantuska 6. Ka soo dejinta Luul, nat ama cibaadaysi, iwm oo ka yimid Adduunka
bilyan ee 2009. Soo dejinta waxay muujisay isbeddel dib u soo kabasho ah 2010 iyo 2011 oo leh US$1.40 bilyan iyo US$1.50 bilyan siday u kala horreeyaan ka hor inta aanay hoos ugu dhicin US$1.33 2012kii.
Soo dejinta, Japan ayaa liiska ugu sareysay 2012 iyada oo soo dejisa US$ 371.06 milyan oo luul ah saamiga suuqa ee 27.86% wadarta guud ee luulka la soo dejiyo ee US$1.33 bilyan. Hong Kong waxa ay ku jirtay kaalinta labaad iyada oo la soo dejiyay US$313.28 milyan oo ah saamiga suuqa oo dhan 23.52% waxa ku xigay Maraykanka oo helay US$221.21 million (16.61%), Australia oo lagu qiimeeyay US$114.79 million (8.62%) iyo Switzerland oo ku jirta kaalinta 5aad soo dejinta US$47.99 (3.60%).
Indonesia waxay soo dejisay US$8,000 qiimihiisu yahay 2012kii isagoo ku taagan booska 104-aad.
Qore: Hendro Jonathan Sahat
Waxaa Daabacay : AGAASIMAHA GUUD EE HORUMARKA Dhoofinta Dalka. Wasaaradda Ganacsiga ee Indonesia.
Previous post: Južni morski biser Indonezije